မကြာသေးခင်ကကမင်းသားဟယ်ရီ၏သတို့သမီးနှင့်မင်းသားဝီလျံရဲ့ဇနီးမှတ်ပုံတင်ထားသောအီမိုဂျီ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုလူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်။ developer များတော်ဝင်မိသားစုများ၏မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏လူကြိုက်အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်များ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုကြောင့်ပြီးသားလူသိများသည်။
ကုမ္ပဏီ DRKHORS ၎င်း၏ website တွင်အနာဂတ်အမည်ခံအီမိုဂျီတစ်ဦး preview ကိုတင်ခဲ့သည်။ လူသိများအမည်များကို - KateMojis နှင့် MeghanMojis ။ ယခု မှစ. ဗြိတိန် noblewoman - သြဇာအမြိုးသမီးမြားဒါပေမယ့်လည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်စားပြုတစ်ဦးချင်းစီသာ။
Kim Kardashian ကယူနီဖောင်းမရပါ!
ဒါဟာကိရိယာအစုံအီမိုဂျီကိတ်ဒါပေမယ့်လည်းသူမ၏ကလေးများနှင့်အတူ၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုမသာပါဝင်သည်လိမ့်မည်ဟုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ Meghan Markle နှင့်အတူတစ် set ကိုမင်းသားဟယ်ရီနှင့်အတူသူမ၏အချစ်ဇာတ်လမ်း၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်စဉ်များမှမြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်။
ရုပ်ပြောင်ဖန်တီးသူ Megan နှင့်သူမ၏ချစ်သူကို၏ရှည်လျားသောစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောမင်္ဂလာဆောင်မှယခုနှစ်မေလ၌မိမိတို့ entry ကိုကြေညာခဲ့သည်။ app ကို၏ကုန်ကျစရိတ်သင်္ကေတဖြစ်ပါသည် - သာ $ 1.99 ။
socialite Kim Kardashian ၏ပုံရိပ်နှင့်အတူအီမိုဂျီ - ငါအီမိုဂျီကိန်းဘရစ် Duchess နှင့်သူမ၏အနာဂတ်သမီးလူကြိုက်များ kimodzi အတွက်ကျော်ဖြတ်ဖို့မည်, တွေးမိ?
သတ်သေကို Mickey Rourke ကနေကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခွေး
ဆိုဖီ Marceau ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဘယ်သူသည် Benji က Madden ရွေးကောက်: Cameron Diaz သို့မဟုတ် Jessie J ကို?
Darren Aronofsky Sookie Waterhouse နှင့်တွေ့ဆုံ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ Ornella Muti
လမ်း၌ရှောက်နေတဲ့ပျောက်ပိုက်ဆံအိတ် Chris Hemsworth ပြန်လာသောနှင့်အကျိုးကိုရရှိခဲ့
အမေရိကန်ရပ်တည်ချက်-up, လူရွှင်တော်နှင့်ထုတ်လုပ်သူ Eliza Schlesinger sexism စွပ်စွဲ
Tom Cruise နဲ့များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
မာရိုင်ကယ်ရီသင့်ရဲ့မန်နေဂျာမှလက်ဆောင်အဖြစ်အသက် 34 တထောင်ဒေါ်လာတစ်အိတ်ဝယ်!
အစိမ်းရောင်စပျစ်သီး - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
ဖျက်ခြင်းမရှိပဲ, ဂျာကင်အင်္ကျီကို clean လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မုရန်-ဆောင်သောအမျိုးသမီးတွေ - သူတို့ဖြစ်ကြပြီးဘယ်လိုဆုတောင်းရန်အဘယ်သူနည်း
ဘွတ်ဖိနပ် - Fall 2014
ကိုယ်ဝန်အတွက်သွေးအားနည်းရောဂါ - သည်သူငယ်အတွက်အကျိုးဆက်များ
Beats - ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရသနည်း
မိန်းကလေးများအဘို့ဆောင်းဦး 2016 အဘို့အလု
ခေတ်မှီ sundresses - နွေရာသီ 2015